Ungayisetha kanjani i-Brother laser printers ku-linux | Kusuka kuLinux
Iningi lokusatshalaliswa kwe-GNU / Linux kwanamuhla kunokwesekwa okukhulu ngehardware yesimanjemanje, kepha-ke, kusekhona abakhiqizi bezingxenyekazi zekhompyutha abavimbela ngandlela thile ukuthi uhlelo lwethu lokusebenza oluthandekayo lungahambisana nesisombululo sabo. Ngenhlanhla yabaningi, lokhu akunjalo kithina esisebenzisa amaphrinta omkhiqizo kaMfoweth 'njengoba benabashayeli bomdabu beLinux.
Njengamanje ngine- UMfoweth 'DCP-L2550DN laser iphrintaAkukona ukuthi iyiphrinta enhle kodwa uma ingivumela ukuthi ngiphrinte ngokushesha, ngekhwalithi enhle futhi ihlangabezana nezindleko ezilindelwe, futhi kulula kakhulu ukuthola amakhokhoji we-Brother TN2410 ne-TN2420 ashibhile, okuyilawo asetshenziswa yile mishini. KuLinux Mint ngenza kahle kakhulu, yize ngenkathi ngithola isibiliboco ngiphatheke kabi kakhulu kunokujwayelekile ukuze ngikwazi ukusenza sisebenze, ngakho-ke kuhle ukuchaza inqubo okufanele bayenze abasebenzisi bemishini efanayo.
Into yokuqala abasebenzisi abanamaphrinta alo mkhiqizo okufanele bayenze ukuya ku- Ikhasi labashayeli be-linux labashayeli bese ulanda abashayeli bemodeli ethile yephrinta, basatshalaliswa yizinhlobonhlobo zezingxenyekazi zekhompyutha ezisatshalaliswa yinkampani (i-CUPS, i-LPR, i-Scanner, i-ADS, amaphrinta e-laser, phakathi kwabanye). Isigaba ngasinye sabashayeli sisinikeza isisombululo semikhiqizo ehambisana naso, yingakho, isibonelo, umshayeli ofanayo angasebenzela amaphrinta we-Brother DCP-L2510D, Brother HL-L2310D kanye ne-Brother MFC-L2710DN.
UMfoweth 'usinikeza ekhasini lokufaka umshayeli ibhukwana elithile elizosetshenziswa ngokusatshalaliswa esinakho, imodeli yehadiwe nokwakhiwa kwayo, ngendlela efanayo, kusinikeza ithuba lokukwazi ukuhlola ukusebenza okulungile kwephrinta, ukumiswa uhlobo lwephepha noma isimo se-cartridges yakho.
Inqubo ngokujwayelekile ilula, siya ekhasini labashayeli be-Brother, silanda umshayeli ohambisana ne-hardware yethu ne-distro yethu, bese ufaka amaphakheji ayisisekelo ngomyalo olandelayo:
Ngemuva kwalokho siqala kabusha i-pc yethu, bese sifaka abashayeli njengoba ikhasi lokusekela likaMfowethu lingakhombisi, kwezinye izimo kufanele siye esigabeni seSystem / Administration / Printers (njengoba kufanelekile ku-distro yakho) bese ukhetha iphrinta osanda kuyifaka, ngale ndlela sizokwazi ukusebenzisa iphrinta yethu ngokwendabuko.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayisetha kanjani i-Brother laser printers ku-linux
Ngisebenzisa umfowethu dcp 7065dn ku-manjaro gnome futhi abashayeli base-AUR.
Laba baphrinta bavame ukuba nabashayeli nge-rpm futhi i-deb ye-archlinux kanye ne-derivatives kuvame ukuba ku-AUR kuthi i-gentoo kube nokumbondelana komfowethu.
Ngabe abashayeli isoftware yamahhala - umthombo ovulekile?
Kulokhu bangabashayeli beLinux, kepha imithombo ayitholakali (ayiwona umthombo ovulekile), ngeshwa
Ngokwalokho abakushoyo, okungenani uMfowethu unokwesekwa okuningi kunoRicoh. NgineRicoh multifunction SP310spnw enhle kakhulu, kepha uma kukhulunywa ngokuyisebenzisa kuLinux inika amakhanda amaningi, futhi yingxenye yokuphrinta kuphela engasetshenziswa. Ukusekelwa kukaRicoh cishe akukho, futhi noma ngabe kuthiwa kunamashayeli weLinux, lapho ifuna ukuwafaka kunika iphutha, ngoba ... i-CUPS iyasebenza !!! Nginayo cishe isikhathi esingangonyaka futhi yize ngithumele ngokushesha i-imeyili kuRicoh ngibacela ukuthi bathole indlela yokwenza abashayeli abafanelekile, kuze kube manje abakaze bavume ukuthi bayitholile i-imeyili. Kufanele ngisebenzise enye i-OS ukuze ngikwazi ukuskena.
Ngisebenzisa i-Wifi laser HL-2135W wifi engabizi kakhulu futhi ibilungile ku-Linux iminyaka. Jabule kakhulu.
IPuigdemont 64bits kusho
Ama-1210w afakiwe kusetshenziswa i-pkgbuild ephelelwe yisikhathi futhi ayiguqula, ayinazo izingcaphuno ezimbalwa, kepha isebenza kahle.
Phendula kuPuigdemont 64bits
Musa ukuthenga uMfowethu, thenga i-HP, futhi ngizochaza ukuthi kungani: Yebo, banabashayeli be-GNU / Linux, kepha banobunikazi. Uma ngemuva kweminyaka engu-X beyeka ukuvuselela abashayeli babo bezinhlamvu ezintsha bese beyeka ukusebenza, bazokushiya ulele phansi futhi akekho umuntu ozokwazi ukuguqula ikhodi ngoba asinayo. Emsebenzini sisebenzisa i-Brother DCP7065dn.
Futhi qaphela i-HP ngoba nayo inamaphrinta angenazo izishayeli zamahhala, njenge-HP LaserJet Pro CP1025nw. Thenga kuphela labo abanabashayeli bamahhala ukugwema ukuphangwa esikhathini esizayo ukuze bathenge iphrinta entsha noma ilayisense elisha le-Windows noma le-Mac OS (abahlala benabo abashayeli).
Musa ukuthenga ngaphansi kwanoma yiziphi izimo iphrinta ye-SHARP, sinomshini wokukopisha / wephrinta we-MX 2310U: qala ngokufaka umshayeli wayo we-linux (http://www.sharp.es/cps/rde/xchg/es/hs.xsl/-/html/centro-de-descargas.htm?p=&q=MX-2310U&lang=ES&cat=0&type=1214&type=1215&os=&emu=) inamaphutha amaningi wokuqamba kabusha amafayili asiphoqa ukuthi sithinte iskripthi ukuze sisebenze kahle, okwesibili sinaso kwinethiwekhi elungiselelwe ngekhodi yomsebenzisi wesisebenzi ngasinye futhi kuvela ukuthi umshayeli weLinux akanandawo angabeka kuyo ikhodi ( ku-Windows yebo ku-Job Management - Ukuqinisekiswa Komsebenzisi - Umsebenzisi). Ngakho-ke angikwazi ukuyisebenzisa kusuka ku-GNU / Linux, futhi ngizamile amaqhinga njengokushintsha ifayela le-PPD (https://linuxsagas.digitaleagle.net/2014/12/05/setting-up-a-sharp-mx-2600n-printer-on-ubuntu/) futhi uzame nomshayeli osebenzisa ubunjiniyela obubuyiselwe ukubethela (https://github.com/benzea/cups-sharp).
I-oda lokuthandayo: I-HP enomshayeli wamahhala, i-HP enomshayeli ophathelene nokuphathwa, uMfowethu onomshayeli ophathelene nokuphathelene, akayona iSharp.
Zidinga i-kanambambili ukuze zisebenze, ngokwesibonelo esimweni somfowethu dcp 7065dn engisebenzisa ingxenye yomshayeli uma kuyisoftware yamahhala kepha idinga umzalwane kanambambili ongekho mahhala.
Gwema ukuthenga amaphrinta ngaphandle kwezishayeli zamahhala, noma zizoba sezandleni zenkampani ekhiqizayo ukuthi uma ingavuseleli umshayeli wayo ngasikhathi sinye nezinhlelo ozisebenzisayo, izokuphoqa ukuthi uthenge olunye uhlelo noma enye iphrinta.
I-HP enezishayeli zamahhala ingcono, qaphela ukuthi kukhona i-HP enezishayeli eziphathelene ne-HP LaserJet CP 1025nw, kwaMfowethu bonke banomshayeli wokuthengisa kodwa okungenani bakhona. Okubi kakhulu ngabashicileli be-SHARP-phrinta abashayeli babo be-GNU / Linux abangenazo izinketho njengokufaka ikhodi oyinikezwe ukuthi uyiphrinte kunethiwekhi, evimbela ukusetshenziswa kwabo kwi-Linux uma inkampani ifuna ukulawula amakhophi enziwe yilowo nalowo, ngokwesibonelo i-Sharp MX 2310U engingazange ngikwaze ngisho nokwenza iphrinta isebenze ngokuguqula i-PPD yayo (https://linuxsagas.digitaleagle.net/2014/12/05/setting-up-a-sharp-mx-2600n-printer-on-ubuntu/) noma ngomshayeli onjiniyela obuyela emuva (https://github.com/benzea/cups-sharp).
Sawubona. (Imini, ubusuku, njll.) Ngabe ukhona umuntu ongangihola ekufakweni nasekucushweni kweskena salaba baphrinta benethiwekhi? noma ungitshele lapho ngingaluthola khona ulwazi olwandulelwe ukugaywa. Lapho ngisebenza khona, kusetshenziswa amamodeli amaningi we-Brother multifunction futhi ukumiswa kwephrinta uma abashayeli befakiwe kulula, kepha kwesinye isikhathi uhlelo (ngokuvamile i-zorin os 9 lite) luthola ngokuzenzakalela ezinye izikena kunethiwekhi, kepha kwesinye isikhathi hhayi. Ngingathanda ukuthi othile angitshele ukuthi ngingasifaka kanjani ngesandla leso sithwebuli (ukuthi kuyalelwa kanjani ukuthi usibone isithwebuli semisebenzi eminingi nge-IP ethile). Ngiseshile futhi okufeziwe kakhulu ukuthi igama lesithwebuli eline-ip livela kuhlu olulula lokuskena kepha akukho okuskenwa. Kwenzeka into efanayo nakimi ngama-samsung multifunctions, kepha lokhu kuvame ukuvela ohlwini lwe-simplescan kaningi kunabazalwane. Kwenzeka kimi ukuthi i-PC ibona isithwebuli kanti esiseduze nayo ayitholi; ngokuba ukuthi bakunethiwekhi efanayo.
Umbuzo owodwa, kuwubuwula ngoba sengivele ngawuthola kodwa kahle, ngizowubuza, uyazi yini ukuthi amaphrinta weLexmark (i-Z11 LPT ne-X75 konke-kukodwa) asebenza kahle kwi-Linux? kulokho ebengikufuna, akukho lutho nhlobo, ku-Ubuntu 9.10 i-Z11 iyasebenza, ukubeka i-kernel endala kuzosebenza?
PS: bangathuka, ngiyakufanelekela 😉
Zama lokhu: faka Ubuntu 9.10 ku-virtualbox bese uzama ukuphrinta ukusuka lapho uye kuphrinta yakho. Uma bekusebenza, ungazama ukwaba kunethiwekhi kusuka kuleyo linux kuye kwi-linux yakho ukuphrinta kusuka kweyakho noma ukuphrinta neyakho nge-pdf bese ubeka ama-pdf ukuphrinta kufolda eyabiwe phakathi kwazo zombili lezi zinhlelo ukuze ukwazi ukuyithatha ku-Ubuntu 9.10.
Leyo yinkinga ngabashayeli abaphethe, kwenzeka okufanayo kwiWindows, uthenge okuthile eminyakeni eyi-15 eyedlule ngeWindows XP futhi akukho mshayeli we-win7 noma i-10.
Ungalokothi uthenge noma yini ngabashayeli abaphethe uma kukhona okuncintisanayo nabashayeli bamahhala, khetha kahle.
Ngiyabonga ngolwazi, ngifisa uma kamuva ungenza isifundo sokuthi ungaxhuma kanjani iphrinta yomfowethu nge-wifi ... kimi yi-MFC9330CDW. Ngiyabonga kusengaphambili
UMnu Paquito kusho
Ngine-Brother HL-L2340DW futhi ngixhuma kuyo nge-Wifi. Ukuxhuma iphrinta nge-USB bekungekho nkinga, kepha ayikwazanga ukusebenza nge-Wifi.
UMfoweth 'ukukunikeza, okungenani i-Ubuntu, okuthile okubizwa nge-Driver Install Tool, okucabanga ukuthi umsebenzisi yedwa (noma cishe, kukhona okumele akwenze) abashayeli abadingekayo. Inkinga ukuthi kufanele wazi ukuthi ungakwenza kanjani. Mina, ngemuva kokuhamba kancane kuGoogle, ngabona ukuthi uMfoweth 'uyakuchazela lapha:
Inkinga ukwazi ukuthi yini isihogo okufanele siyibeke ku-URI ... Ngakho-ke, ngokuqhubeka nokusesha ngithole impendulo emazwaneni eyenziwe nguJose1080i othile kulesi sihloko:
Phendula u-Señor Paquito
Akusebenzi kuwo wonke amamodeli kaMfowethu, akunjalo? Ngine-laser emnyama nomhlophe futhi ayikho indlela
U-Enrique Gallegos kusho
Ngisebenzisa izingcezu zeLinux Mint 19 Cinnamon 64, ngithenge iPrinta ye-Brother HL-1110 compact monochrome laser futhi ngemuva kokushisa inhliziyo yami (ihamba nge-USB) esikhundleni se-Wifi, ivela ekuphatheni futhi ihambisa nemibhalo kodwa iphume ingenalutho, ngoba enginakho ukuthi ngibe ne- «windols» ukwenza imidwebo, lapho kuhamba kahle khona.
Phendula u-Enrique Gallegos
IPlatzi: Ipulatifomu ecacile yokufunda ngobuchwepheshe (Isipiliyoni sami)